ILanga kunye neeApartments zeSky Klaipeda ezinombono weDolophu endala - I-Airbnb
ILanga kunye neeApartments zeSky Klaipeda ezinombono weDolophu endala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAistis
Amagumbi ama-2 abanzi e-Sun & Sky Apartments enombono ophefumlayo wedolophu yakudala yaseKlaipeda ibekwe kumbindi wayo yonke into onokufuna ukuyihlola!
Uninzi lweendawo ezidumileyo ezifana nedolophu yakudala yaseKlaipeda, amaziko okuthenga e-Akropolis, i-Svyturio arena, iindawo zokutyela, amazibuko amadala & amatsha eenqanawa eziya eCuronian Spit, eNida naseDolphinarium zonke zifikeleleka ngeenyawo kwimizuzu eyi-10-15!
Paka imoto yakho simahla kwindawo yethu yokupaka engaphantsi komhlaba kwaye wonwabele iiholide ezingenaxinzelelo.
Ngokufanelekileyo ilungele abantu abadala be-4 okanye intsapho.
Siye saya kumazwe aphantse abe ngama-50, ngoko ebudeni bokuhlala kwethu apho, sabona eyona nto sasiyifuna kakhulu, yiloo nto igumbi lethu lihonjiswe ngobutofotofo engqondweni.
Ukulala: igumbi lethu linegumbi lokulala elinebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini (i-160 cm), kunye negumbi lokuhlala (ibhedi enesofa enendawo yokulala yabantu ababini enobubanzi obuyi-150 cm kunye nentuthuzelo eyongezelelweyo silungiselele enye i-mattress enokuthi ibekwe phezulu).
Ukupheka: Eli khitshi lijongeka linesitayile nelinomtsalane linazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokulungiselela ukutya (i-microwave, iketile, idowu, umatshini wekofu nokunye okuninzi). Yonwabela ikofu/iti YAMAHHALA nanini na ufuna.
Ishawari: igumbi lokuhlambela elineshawa, umatshini wokuhlamba, isixhobo sokomisa iinwele, kunye nezinto eziyimfuneko kwigumbi lokuhlambela: ishampu, ijeli yeshawa. Iibhedi ezicocekileyo kunye neetawuli zokuhlala okumnandi.
I-Balcony: ukuba ufuna ukonwabela umbono weKlaipeda, thatha imifanekiso yakho emangalisayo okanye yesixeko ungayenza loo nto kwibalcony enendawo ekhululekileyo nebukekayo.
Ezinye izinto zeSun & Sky Apartments:
Isofa entle kakhulu kunye ne-recliner
Iiwodrophu eziphangaleleyo ezinendawo yokungena, intsimbi, i-ayina ibhodi, isomisi.
I-wifi + tv ekhawulezayo nesimahla.
Inkundla yebhasikithi yabucala kunye nebhola yokudlala.
Indawo yokupaka yasimahla ephantsi komhlaba.
50 square metres amagumbi.
Ubumelwane buzolile kwaye bukhuselekile ngeekhamera ezininzi zokhuseleko ezijikelezwe zizakhiwo ezitsha kodwa kwangaxeshanye imizuzu embalwa uhambe uye kwidolophu endala. Ineyadi yabucala kunye nebala lebhola yomnyazi.
Umbuki zindwendwe ngu- Aistis
Nje ukuba ubhukisiwe uya kuba nalo lonke ulwazi lwethu kwaye siya kuzama ukuphendula 24/7 kuyo nayiphi na imibuzo yakho. Okanye ukukunceda uhambe.